लोक तथा दोहोरीगीत एवार्ड - एवार्ड - साप्ताहिक
लोक तथा दोहोरीगीत एवार्ड
लुम्बिनी अञ्चलका लोक स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत ११ विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त छनौट एसएमएस भोटिङका लागि गरिएको हो । 'विशाल लुम्बिनी लोक दोहोरी एवार्ड-२०७१' अन्तर्गत विशाल डिजिटल काठमाडौले विशाल लोक तथा दोहोरी गीत एवार्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागेको छ ।
पुरस्कृत गरिने विधामा सर्वोकृष्ट लोकदोहोरी एल्बम, गायक, गायिका, शब्द, लय (भाका), नवगायक, नवगायिका, नायक (मोडल), नायिका (मोडल), भिडियो निर्देशक तथा सञ्चारकर्मी छन् । भोलि मंसिर २७ गते तानसेनमा कार्यक्रम आयोजित गरी विजेता घोषणा गर्दै एवार्ड वितरण गरिनेछ ।
संगीतकर्मीलाई विन्ध्यवासिनी एवार्ड
आर्यन र केकीलाई डी सिने एवार्ड
iPad को होम बटन तथा sleep/wale बटनको काम के हो ?
डि सिने एवार्ड
आफ्नै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ नभएको स्थितिमा भाइटीकाको दिन के गर्नुहुन्छ ?
स्वार्थी दुनियाँले दिलाएको खुशी श्रावण २८, २०७६